Soo dejisan PCI-Z 2 – Vessoft
WindowsNidaamkaTijaabada iyo TijaabooyinkaPCI-Z
Bogga rasmiga ah: PCI-Z
PCI-Z – software si uu u muujiyo macluumaadka ku saabsan qalabyada PCI ee lagu rakibay kombiyuutarka isticmaalaha. PCI-Z waxay ogaan karaan qalabka aan la aqoon ee ku xiran PCI, PCI-E iyo PCI-X. Qorshuhu wuxuu hubiyaa nidaamka oo wuxuu ogaadaa dhammaan macluumaadka la heli karo ee ku saabsan qalabka PCI sida soo saaraha, nooca qalabka, magacaaga, darawalka rakibay iyo qaabka saxda ah. PCI-Z waxay si joogto ah u cusbooneysiisaa macluumaadka PCI-da aqoonsiga, sidaa darteed qalabka aan la aqoon ee nidaamka waxaa lagu aqoonsan karaa aqoonsiga, ka dibna ka hel wadaha saxda ah iyada oo loo marayo liiska erayada ee software-ka iyo hagaajinta aaladaha dhibaatada leh. PCI-Z sidoo kale waxaa ku jira aalad aad ku dhoofiso xogta, sameysaan shaashado iyo fariimo diraan warbixin faahfaahsan oo ah xog ururin guud si loo hubiyo qaabeynta.
Helitaanka qalabka aan la aqoon ee PCI ee nidaamka
Raadi darawalada adiga oo adeegsanaya macnaha guud
Muuji macluumaadka faahfaahsan ee ku saabsan qalabka
U dirista warbixinta faahfaahsan ee xogta guud
Soo dejisan PCI-Z
Faallo ku saabsan PCI-Z
PCI-Z Xirfadaha la xiriira